Ikhaya Lakho Elikude Nekhaya
Igumbi lakho lokulala e i-townhouse sinombuki zindwendwe onguJulie
-Ixabiso elithotyiweyo lelondwendwe olunye kuphela; indawo iza kuthatha abantu ababini
-Isebenza kumgangatho wesibini
-Ukuthi cwaka, unobuhlobo, ukhuselekile ebumelwaneni
-I-Ctrl ukuya kwi-K-10; imizuzu eyi-7 ukusuka
kwi-i70 -Kansas City Plaza imizuzu eyi-40, I-Topeka imizuzu eyi-25
-Ucoceko, awubhatalelwa iCOVID-19
-Ukusetyenziswa ukungasondeli ebantwini
-Umphandle ngoku uyalungiswa njengoko imozulu ivuma.
-2 iikati ezinamadoda zihlala apha, kodwa azihlali nabanye abantu kwindawo yakho
Kufuneka kuhlalwe ixesha elide? Ndwendwela enye indawo yam yakwa-Airbnb: Iflethi Enefenitshala
~Yonke into kweli khaya itshintshwe okanye yahlaziywa ukuze ikunike indawo efudumeleyo/epholileyo nepholileyo yokuhlala. Imibala ezolileyo, engathathi hlangothi ikuvumela ukuba uphumle ngexesha lokuhlala kwakho.
~I-Flat screen TV ivalelwe kwi-armoire ukuze uyibukele.
~Phantsi ezinye izithuthuzeli zokuzonwabisa kwakho ukuze ungabandi kakhulu okanye ushushu kakhulu kunye nobunzima obungeyomfuneko ngelixa ulele. Iingubo ezongezelelweyo ezikhaphukhaphu kunye nemithwalo ziyafumaneka kwi-walk-in closet. Zombini iibhedi zineomatrasi zenkumbulo entsha.
~Ifriji ibekwe kwigumbi; ezantsi ngasekunene kwe-armoire.
~Ibhedi kunye neengcango zegumbi lokuhlambela zitshixwa ngesitshixo. Ubumfihlo, ukhuseleko, kunye nomoya ozolileyo uya kufunyanwa ebusuku okanye uhlale ixesha elide njengoko siza kukubonelela ngexesha lokuhlala kwakho.
~Igumbi lokuhlambela elikhulu, eliphangaleleyo
~Ikhowudi yokungena engenazitshixo inikezelwe ekubhukisheni kwakho ngoko nangoko.
~Izitshixo ezikhanyisiweyo zokukunceda ekukhanyiseleni kwindawo yakho ukuba unokungena ebusuku kwaye ungazi ukuba loluphi utshintsho oluya kukunceda.
~Iinombolo zezindlu zipeyintwe ecaleni kwendlela yam yokungena ukuze kube lula ukuchongwa kwekhaya lam.
-Igumbi lokulala lomnini liphantsi kweholo ukusuka kwigumbi lokulala labucala kunye nebhafu.
-Mahala kwindawo yokupaka ezitalatweni
4.87 · Izimvo eziyi-491
Icala lasentshona likaLawrence linqweneleka kakhulu kwaye likwayinxalenye entsha yamakhaya. Ikhaya lam likufutshane nohola wendlela u-K-10, kodwa alikufutshane kakhulu ukuze uve ingxolo yendlela enkulu. Amakhaya amaninzi anabanini kwaye onke ahlala ngabamelwane abaninzi abahamba nabantwana babo kunye nezilwanyana zasekhaya mihla le kwindawo yam yekona. Ungazikhathazi ngokuba ikhaya lam libekwe ekoneni njengoko iifestile ezintsha ebendizifakile zirhaxwa yingxolo yangaphandle-enyanisweni yenza kubenzima ukuva imvula ngaphandle kokuba kukho iindudumo kunye nemibane.
~Ukuba kukho into oyilibeleyo ndingakwazi ukukuboleka into kwizinto zam zobuqu.
~Andizivumeli iindwendwe ukuba zisebenzise iwasha/isomisi sam
~Andizivumeli iindwendwe ukuba zithathe izinto ekhitshini lam ukuya kwigumbi labo labucala